8.5 Iitafile -I-Geofumed
Ngoko sele sikubonile ukuza kuthi ga ngoku, Siyazi ukuba "ukuphosa" imigca kunye nokudala izinto ezibhaliweyo kumgca ngumsebenzi onokuthi wenziwe ngokukhawuleza nangokulula kwi-Autocad. Ngapha koko, iya kuba yiyo yonke into efunekayo ukwenza iitafile ngokulula nangokukhawuleza, ukudibanisa, umzekelo, imigca okanye iipylyline ezinokubhalwa kwezinto ukwenza ukubonakala kwetafile.
Nangona kunjalo, iitafile ezikwi-Autocad luhlobo lwento ezimeleyo kwezo tekisi. Iqela “leTafile” lonyawo lwe- “Annotate” likuvumela ukuba ufake iitafile kwimizobo ye-Autocad ngendlela elula, kuba, akuba umthetho uqalile, kuya kufuneka uchaze ukuba zingaphi iikholamu kwaye zingaphi imigca itafile eza kuba nayo, phakathi kwezinye ezilula iiparameter Makhe sibone indlela yokufaka iitafile kunye nokubamba idatha kuzo.
Ngeetafile kunokwenzeka ukuba wenze ubalo oluthile, njengephepha le-Excel, nokuba awulindelanga konke ukusebenza kwenkqubo. Xa ukhetha iseli, iribhoni ibonisa isingqisho esibonakalayo esibizwa ngokuba "yiThebhile yeselfowuni" ngokukhetha okunjalo kufana nespredishithi apho, phakathi kwezinye izinto, sinokwenza ifomula eyenza imisebenzi esisiseko yedatha itafile.
Ifomula ngamafuphi amaxabiso ze iqela leeseli yetafula ilingana naleyo yayisetyenziswa ngo-Excel, kodwa ime kukuba sekukubi kangangokuba ngokwenene akunakusebenza ukuba usebenzise iitafile AutoCAD ukulungiselela ezi njongo. Kwimeko nayiphi na into, kunokuba luncedo kakhulu ukusetyenziswa kwedatha yakho kwi-spreadsheet ye-Excel uze udibanise netafile ye-Autocad. Nangona i-data yespredishithi ishintshiwe, ubukho bekhonkco phakathi kwetafile kunye nephepha livumela ukuhlaziya ulwazi kwi-Autocad.
Ekugqibeleni, okufana neendlela zombhalo, sinokudala izitayela zokufaka izicelo kwiilayibhile zethu. Ngamanye amazwi, sikwazi ukudala iseti lweempawu ntetho ezifana neentlobo umgca, imibala, nende ezinemiphetho phantsi igama ethile uze kusebenza kuzo ezitafileni ezahlukeneyo. Kuyacaca ukuba, ngenxa yale nto sinobhokisi yencoko evumela ukuba sikwazi ukulawula izitayela ezahlukeneyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-8.4 i-Multi-line text
Post Next ISAHLUKO 9: osnapOkulandelayo »